Kismaayo News » Wasaaradda Wax-Barashada Somalia !!!
Wasaaradda Wax-Barashada Somalia !!!
Kn: Waxbarasho kama jirto Wasaaradda wax barashada somalia, haddii ay ka jirto ma dhici lahayn inta kulan deg deg ah la isugu yeero shaqaalaha wasaaradda si looga hadlo cida aan waayadaan safar banaanka ah aadin (shir dibada) ayadoon marna la is waydiin waxa shirkaas looga hadlayo , waxa ay tahay in lala tago , iyo cidda ku haboon in madashaas loo diro , iyadoo la eegayo faa iidada ugu jirto waxbarashada dalka ka qayb galka shirkaas .
Shaqada wasaaradda wax barashada Somalia haatan waa ka qayb galka shirarka la bixyo Tikitka iyo habayn dhaxa oo kaliya . waxaa hubaal ah haddii lagu marti qaado kulan wasaaradda su’aasha ugu horaysa ay waydiinayaan qaban qaabada cidda leh waxaa weeye , Yaa qaba Tikitka iyo Habayn dhaxa (Hotelka iyo Hunguriga) ?
Haatan waxay wasaaraddaas baaxadda leh ee hawsheedii ahayd Bar-baarinta iyo baridda ubadka somaliyed Tacliin ay kaga waynaadaan baryada lagu qasbay ilaa heer lagu dhajiyay gidaaradda iskoolada dhif dhifka ah ee ka jira dalka astaamaha Hay’ado gargaar oo ah farriin dadban oo sheegaysa ”wax ma qabsan kartaan ilaa dunidu idin garab qabato” .
Xafiiska yare e ay Wasaaradda Tacliintu ku aruur santahay waxaa haatan laga heli karaa hal xeel dheere wax barasho (Muuse Faraax) isna waxaa hanfiyay oo curyaamiyay sareeyayaasha magacyada qabiil ku gaaray kuraas ay aqoon ku tageen haddii dawladdu dadkeeda xurmo u hayn lahay, waxayse wasaaraddu ku faantaa inay maamusho 6 iskuul oo kaliya.
Hanaanka noocaas ah iyo fikirka qaloocan midkoodna waxba kuma kordhin doonaan wax barashada iyo Bar- baarinta naga maqan inta ay joogaan masuuliyiin Aqoontii iloobay waliba doonaya inaan anagana ilowno.
Waxaase ka wanaagsan inaan iloowno ayaga oo aan goobano kuwo aqoon dhaama iyo xeel dheerayaal Bar-baarineed , bal malee 9,925,640 Million dad gaaraya ayaa waxaa ka dhaxeeya 6 iskool !!!